Baarlamanka Soomaaliya oo Sabtida uguda galya Ansixinta Xeerhoosaadyadiisa – SBC
Baarlamanka Soomaaliya oo Sabtida uguda galya Ansixinta Xeerhoosaadyadiisa
Posted by Webmaster on November 21, 2012 Comments
Baarlamanka Soomaaliya ayaa soo gaba gabeeyay Doodo dheer oo ku aadanaa ka arinsiga xeer hoosaadka Baarlamanka taas oo soo socotay in mudo ah.
GUdoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Prf Maxamed Cismaan Jawaari ayaa saxaafada u sheegay in iminka waxii ka dambeeya ay Xildhibaanada Baarlamanku guda galayaan howlahooda ku aadan ansixinta xeer hoosaadka Baarlamanka.
Waxa uu sheegay Gudoomiye Jawaari in ka dib dood farabadan oo ay qodobo ku jira xeer hoosaadka baarlamanka ku shaqeynayo ay ka yeesheen xildhibaanada waxaa la go’aamiyay in Maalinta Sabtida waxii ka bilowda ay xildhibaanada u guda galayaan ansixinta si toos loogu shaqeeyo loona magacaabo gudiyadi hoosaayada Baarlamanka.
Baarlamanka Somaaliya ayaa intii ay ku guda jireen howlaha ka doodista xeer hoosaadyadooda waxay qabten shaqooyin badan iyagoo ansixiyay Raiisul wasaaraha iyo xukuumadiisa.
Ugu dambeyn Gudoomiye Jawaari ayaa sheegay in Baarlamanka Soomaaliya uu u jeesan doono dhanka bulshada isagoona sheegay in ay u baahi qabaan helitaanka fekradaha shacabka iyo doodaha ay ka qabaan Baarlamanka Soomaaliya.
“Haduu alle yiraahdo waxan dhexgali doonnaa shacabka si aan u helno Fegradahooda kaga aadan Baarlamanka maadaama dadka ay matalaan ay yihiin iyaga”